I-Krisp: Khansela Umsindo Wangemuva Kuzingcingo Zakho Zenkomfa Martech Zone
I-Krisp: Khansela Umsindo Wangemuva Kuzingcingo Zakho Zengqungquthela
NgoLwesibili, Agasti 11, 2020 NgoLwesibili, Agasti 11, 2020 Douglas Karr
Isonto lami ligcwele ukuqoshwa kwe-podcast nezingcingo zenkomfa. Kubukeka sengathi kuvame kakhulu kunalokho, lezi zingcingo zinabantu abambalwa lapho abangakwazi ukuthola indawo ethulile. Ngeqiniso kuyangihlanyisa.
Faka i-Krisp, ipulatifomu eyehlisa umsindo wangemuva. UKrisp ungeza isendlalelo esingeziwe phakathi kwemakrofoni / isikhulumi sakho sangempela nezinhlelo zokusebenza zengqungquthela, engavumeli noma yimuphi umsindo udlule.
Ngokuya ngemisindo ehlukene engama-20,000 50,000, izipikha ezingama-2,500 XNUMX, namahora angu-XNUMX XNUMX omsindo, uKrisp wafunda futhi wakha inethiwekhi ye-neural ebizwa ngokuthi I-krispNet DNN. Bayithuthukisile ngokungeza eyethu isosi eyimfihlo, futhi umphumela ukucubungula umsindo womlingo okwazi ukubona nokususa noma yimuphi umsindo.
I-Krisp iyindawo eyimfihlo, futhi, ngoba konke ukucubungula umsindo kwenzeka ngqo kudivayisi yakho.
Lapho Ukusiza Ngomsindo Wasemuva Kusebenza khona:
professionals ukusebenza ekhaya noma ezindaweni zomsebenzi zomphakathi
Othisha abaku-inthanethi ungajabulela amakilasi akhiqizayo akhiqiza umsindo nabafundi
Ama-podcasters Ungaqopha ama-podcast angenamsindo wekhwalithi ephezulu ezilalelini zakho
Amaqembu akude ungaba nemihlangano engenamsindo
Izikhungo zezingcingo kungakhuphula umkhiqizo we-ejenti lapho besebenza ekhaya (HBA) noma ehhovisi elivulekile
I-Krisp ingasatshalaliswa ngokuphepha ezingeni lebhizinisi noma ihlanganiswe kuzingxenyekazi zakho nakumadivayisi kusetshenziswa i-SDK yabo. Eqinisweni, isoftware ye-Krisp® AI-powered technology software ihlanganiswe kumadivayisi angaphezu kwezigidi eziyi-100 futhi isivele yathuthukisa ngaphezu kwemizuzu eyizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi zokuxhumana ngezwi.
Landa i-Krisp Mahhala
Tags: aiumsindo wangemuvaUkukhanselwa komsindo wangemuvakrispinethiwekhi ye-neuralukukhanselwa komsindo
I-Anatomy Yokudiliza Ngo-2020, Nemikhiqizo Eyenzile
Uhlu lwezinqamuleli zekhibhodi ze-Twitter